“Aza matahotra aterineto”: Midika fanehoan-kevitra ny famoronana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2019 5:52 GMT
Fanamarihana: Nosoratan'i Derechos Digitales ny lahatsoratra nivoaka voalohany tamin'ny teny Espaniôla, ary nadikan'i Silvia Viñas .
Noho ny vondron'olona mikasa ny hiaro ny tombotsoan'ny fahafaham-pon'ny indostria dia aseho ho toy ny sehatra ho an'ny piraty izay hanimba ny kolontsaina araka ny fantatsika ankehitriny ny aterineto. Misy ny fitsipika amin'ny lalàna novolavolaina toy ny SOPA, ACTA na TPP izay natao hiarovana ny maodely ara-barotra mifototra amin'ny rafitry ny fizakamanana miha-voafetra hatrany ary tsy manaja ny zo fototra toy ny fahalalaham-pitenenana sy ny fiainana manokana .
Ity no sehatra ilaintsika hampiasaina sy hokarakaraina ary hoarovana. Izany no antony ilazantsika hoe: “Aza matahotra Aterineto” (#NoTemasaInternet.)
13 ora izayAmerika Latina